रुघाखोकी लागेको छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(May 28, 2022)
रुघाखोकी लागेको छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
माघ ७, २०७८ शुक्रबार १४:२९:३३ | डा. जामुन प्रसाद सिंह
यो महामारी हो । महामारीमा ओमिक्रोन र रुघाखोकीलाई लक्षणको आधारमा फरक छुट्याउन सकिँदैन । यसलाई चिकित्सकले विशेष निगरानी र अनुभवका आधारमा अलि अलि फरक छुट्याउन सके पनि कुनै यस्तो मापदण्ड छैन जसका आधारमा हेरेर यकिनका साथ यो रुघाखोकी र यो ओमिक्रोन भनेर छुट्याउन सकियोस् ।
महामारी भनेको त्यस्तै त्यस्तै समूह भएको, त्यस्तै त्यस्तै लक्षण भएको सबै रोगलाई महामारीमै आएको रोग सम्झने अर्थात रुघाखोकी, टाउको दुखाइ, घाँटी दुखाइ, घाँटी खसखस गर्ने बिरामीलाई हामीले अहिले ओमिक्रोन सम्झने हो। यसमा तुरुन्तै आत्तिएर गएर परीक्षण गराइ हाल्नु पनि पर्दैन ।
ओमिक्रोन पोजेटिभ भयो भनेर आत्तिएर गएर परीक्षण गराउनु पर्दैन । सामान्य लक्षण छ भने आफूलाई घरमै अरुबाट अलग राख्ने । लक्षणको आधारमा स्टेथेस्कोप लगाएर जाँचेकै आधारमा ओमिक्रोन र रुघाखोकी छुट्याउन नसकिने भएकोले श्वास फुलेको, श्वासको गति बढेको जस्तो लागेमा जाँच गर्न जानुपर्छ । एउटा वयस्क मान्छेको श्वासको गति २० भन्दा बढी भएको खण्डमा, जीउ, हात गलेर उठ्नै नसक्ने भए, ज्वरो नआएको अवस्थामा मुटुको धड्कन १ सय भन्दा बढी भए जुन आफैँले पनि नाप्न सकिन्छ । एक मिनेटमा नाडीको गति १ सय भन्दा बढी भए शरीरमा कुनै न कुनै समस्या छ भन्न सकिन्छ । त्यसबेलामा भने हामीले कोरोना भाइरसको जाँच गराउने हो ।
अथवा घरमा उच्च जोखिममा रहेको दमका रोगी, गर्भवती लगायतका अरु मानिस छन् भने विशेष निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा भने कोभिड परीक्षण गर्नुपर्छ । किनकि सामान्य मान्छेलाई यसले केही असर नगरे पनि घरका अरु मानिसलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । दीर्घ रोगीलाई छिटै असर गर्न सक्ने हुनाले उनीहरुलाई सुरक्षित बनाउन सकियो परीक्षण पश्चात ।
अन्यथा सामान्य रुघाखोकी, घाँटी दुखेको, टाउको दुखेको छ भने परीक्षण गराइ हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । ओमिक्रोन ४/५ पटकभन्दा लामो समयसम्म नजाने हुनाले दिनमा ३/४ पटक तातोपानीको वाफ लिने, मनतातो पानी धेरै खाने, खाने कुरा प्रशस्त खाने, मन प्रशन्न राखेर बस्ने गर्नुपर्छ । ५ दिनदेखि यसको लक्षण गइसक्ने हुनाले मास्क लगाएर सुरक्षित तवरले आफ्नो काममा फर्कँदा हुन्छ ।
यस्तो महामारीमा काठमाण्डौ अथवा धनुषामा रुघाखोकी फैलियो भने सबैलाई लाइन लगाएर परीक्षण गर्नुको केही अर्थ छैन । यदि जटिल समस्या देखिएमा वा उच्च जोखिम रहेका मानिस घरमा छन् भने मात्र परीक्षण गरौँ ।
यसमा परीक्षणलाई त्यति गम्भीर रुपमा नलिउँ । परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आयो भने त ठीकै छ । नेगेटिभ आयो भने पनि कोभिड होइन भन्न सकिँदैन । किनकि त्यो परीक्षण नेगेटिभ भए पनि त्यसको सम्भावना धेरै उच्च छैन भन्ने होइन।
हामीले सुरुदेखि भनिरेहका छौँ कोभिड परीक्षणको संवेदनशीलता ५०/६० प्रतिशत भन्दा टाढा छैन । १० जना कोभिड भएको मान्छेको परीक्षण गर्दा ५/६ जना पहिचान भए पनि ३/४ जना यसै छुट्न पनि सक्छ । यसकारण कोभिड परीक्षण भएको छैन भने जहाँतहीँ त्यसै हिँड्ने भन्ने हुँदैन ।
लक्षण देखिए घरमै आराम
लक्षण देखियो भने ४/५ दिन घरमै आराम गरेर बस्नुस् । अहिलेसम्म लकडाउन गरिएको छैन । स्मार्ट लकडाउन भनेका छौँ हामीले । त्यो भनेको लक्षण देखियो भने नागरिकले आफैँ बुझुन् । आफैँलाई लकडाउन गरुन् भन्ने हो । यसो गर्दा कोभिड नभएका मानिस स्वतन्त्र रुपले हिँड्न् भन्ने हाम्रो मनशाय हो ।
अस्पतालको सिट भरियो भने हामीले अस्पतालको तर्फबाट चेतावनी दिने हो, सचेत बनाउने हो । त्यो भनेको अब अस्पतालले धान्न सक्दैन तपाईँहरु लकडाउनमा जानुस् । लकडाउनमा गएन भने अस्पतालमा सिट नै छैन भन्ने चेतावनीका सङ्केतहरु हामीसँग पनि छ । स्मार्ट लकडाउनका बेला हामीले त्यो मापदण्ड (प्रोटोकल) बनाएका छौँ । केही सिटहरु खाली हुन्जेल लकडाउन वा कफ्र्युमा हामी जान दिँदैनौँ ।
कोभिडलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन् । यसलाई रोक्छु, सुस्त बनाउँछु, यसलाई जित्छु, देशबाट भगाइ दिन्छु भन्ने कुरा अब नगरे हुन्छ। कोभिड छिरेपछि छिर्यो । लगभग दुई तिहाइ मान्छेलाई लाग्छ अनि यसको प्रभावकारिता सकिन्छ । हामीले करिब ६० प्रतिशत नागरिकलाई हुने अनुमान गरेका छौँ ।
तपाईँहरुले आराम गर्नुभयो भने त्यसको दुई वटा फाइदा छ । पहिलो तपाईँको ज्यान सुरक्षित हुन्छ । कोभिड लागेको बेलामा तपाईँले काम गर्नुभयो, हिँड्नु भयो, अनावश्यक रुपले जहाँ पायो त्यहीँ जानु भयो भने शरीर थकित हुन्छ । थकित शरीरमा कोभिडले झन् धेरै आक्रमण गर्छ ।
कोभिड लागेको बेलामा अफिसको तनाव, घरको तनावले झन बढी थकित हुनुहुन्छ तपाईँ । तपाईँकै शरीरलाई हानी गर्छ । त्यही भएर लक्षण देखिएमा घरमै आराम गर्नुस्, त्यो तपाईँको लागि, परिवारको लागि र देश तथा समाजको लागि पनि राम्रो हुने भएकोले सबैको लागि घरमै आराम गरेर बस्नुस् ।
ओमिक्रोनको सङ्क्रमणदर एकदमै उच्च भएकोले तपाईँलाई लक्षण देखिएकै दिन घरका परिवारलाई पनि सङ्क्रमण भैसकेको हुनसक्छ । तर, शरीरको प्रतिरोध क्षमताका कारण कसैमा लक्षण देखिन सक्छ, कसैमा नदेखिन सक्छ।
लक्षण देखिएकाहरु एउटा कोठामा बस्ने । नदेखिएकाहरु अर्को कोठामा बस्ने । भाइरल लोड कम गर्नका लागि कोठा छुट्याउन भनिएको हो । बाथरुम पालैपालो प्रयोग गर्ने । हाच्छिउँ गर्दा मुख छोप्नका लागि तौलिया सबै जनाले छुट्टै प्रयोग गर्ने । घरमा बसेको बेलामा पनि मास्कको प्रयोग गर्ने । पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाले मास्कको प्रयोग गर्नु हुँदैन । आवश्यक छैन । मास्कले झन जटिलता ल्याउन सक्छ उनीहरुमा ।
आफूले गरेका सिंगान, खकार वा यस्तै पदार्थ बाथरुममै फाल्न पनि सकिन्छ तर, फालिसकेपछि राम्रोसँग क्लोरिन पानी वा स्पिरिटले सफा गर्ने जुन बजारमा किन्न पाइन्छ ।
खानेकुरामा खासै बार्नु पर्दैन । तर, फ्रीजको चिसो सीधा नखाने । फ्रीजबाट निकालेको एकाध घण्टामा खाने, मनतातो कुरा खाने, चिसो भएको हुनाले प्रोटिनयुक्त तथा माछा, मासु खान सकिन्छ । दालहरु खाँदा मिसाएको दुई किसिमको दाल खाने । शाकाहारी तथा घरबाट बाहिर ननिस्कने मान्छेका लागि भिटामीन डी, खाने । माछा, मासु खानेका लागि खासै भिटामीनको आवश्यक्ता पर्दैन ।
प्रोटीनयुक्त र शरीरलाई पुग्ने गरी खानुपर्छ यस्तो समयमा । मोटाइन्छ भनेर यस्तो बेलामा कम खाने नगर्नुस् । ४/५ दिनमा कोही पनि मोटाउँदैन । यसले गर्दा हामीमा जाडो तथा कोभिडसँग लड्ने शक्ति आउँछ ।
ओमिक्रोनलाई कम नआकौँ
ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा कम खतरनाक त हो तर, डेल्टाभन्दा ४/५ गुणा छिटो प्रसार हुन्छ । ओमिक्रोनले मान्छे मर्न सुरु भइसक्यो । पहिले पनि १७/१८ हजारलाई लाग्दा केही भएको थिएन । पछि हाम्रो अस्पतालले थेग्नै सकेन । त्यसकारण यो कम खतरनाक हो भनेर नबस्नुस् । युरोपमा ओमिक्रोनले मृत्यु हुन सुरु भैसक्यो । कोभिड भनेको पहिले जस्तै भ्रममा नपरौँ ।
अहिले कम भाइरल लोड भएका बेलामा तपाईँ सङ्क्रमित हुनु भएको छ भने भाग्यमानी ठान्नुस् । तर, माघ दोस्रो हप्तादेखि भाइरल लोड बढी हुने सम्भावना छ । त्यसकारण यसलाई रुघाखोकी मात्रै हो केही होइन भनेर हल्का रुपमा लिएर बाहिर ननिस्कौं ।
खोप लगाउन अनुरोध
खोप नलगाएकाहरुलाई मेरो अनुरोध के छ भने सरकारले खोप ल्याउँदा सबैभन्दा पहिले डाक्टरलाई खोप दियो । डाक्टरको औजार भनेकै औषधि हो ।
खेल्ने भनेकै औषधिसँग हो । औषधिको नकारात्मक असर के छ, औषधिले के हुन्छ ? औषधि खाएर मान्छे मर्छ वा असर मात्र हुन्छ भन्ने कुरा डाक्टरलाई बाहेक अरुलाई कसलाई थाहा हुन्छ ? कुनै पत्रपत्रिका वा अरु कसैलाई थाहा हुँदैन । जबकि आएको खोप ९० प्रतिशत हामी स्वास्थ्यकर्मीले लिइसक्यौँ भने तपाईँलाई खोप लिने डर किन ?
मधेश प्रदेश वा सम्पूर्ण नेपालीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बुस्टर डोज आउँदा पनि पहिलो हामीले नै लगाइ रहेका छौँ । बुस्टर डोज लियो भने मुटु फेल हुन्छ, जीवन सानो हुन्छ भन्ने सबै बेकारका कुरा हुन् । हाम्रो जीवन अमूल्य छैन ? कक्षामा प्रथम, दोस्रो भएर राम्रो छ, तेज छ भनेर तपाईँहरुले डाक्टर पढाएको होइन हामीलाई ?
अनि हामी सबैले खोप लिँदा तपाइँहरु खोप लिन किन डराउने ? सबैको जीवन बराबर हो । कोभिडका सन्दर्भमा बुझ्ने त हामी हौँ नि । खोपको सम्बन्धमा, त्यसको असरका बारेमा सबैभन्दा धेरै बुझ्ने त हामी हो नि ।
हामीले तेस्रो खोप लिँदा तपाईँहरु भने पहिलो पनि नलिने ? त्यसकारण यहाँहरु सबैसँग विनम्र अनुरोध छ खोपको साइड इफेक्ट छैन । लाखौँलाख मान्छेले लगाएका छन् । उसोभए खोप नलगाएका मान्छे मरेका छैनन् ? खोप लगाएको मान्छे मर्यो भनेर हल्ला गर्ने होइन ।
७०/८० वर्षदेखि भर्खर डाक्टर पास भएकासम्मले खोप लगाएका छन् । खोपको साइड इफेक्ट छैन । यसकाबारे भ्रम फैलाइएको हो । त्यसकारण तपाईँहरु आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा आजै गएर खोप लगाउनुस् । तपदेशले अर्बौँ अर्ब खर्च गरिरहेको छ । यसको सदुपयोग गरौँ । सबैलाई कोभिडबाट मुक्त हुने वातावरण बनाऔंँ ।
(कोभिड अस्पताल जनकपुरका प्रमुख डा. जामुन सिंहसँगको कुराकानीमा आधारित)
अन्तिम अपडेट: बैशाख २९, २०७९
डा. जामुन प्रसाद सिंह
डा. जामुन प्रसाद सिंह जनकपुरको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कोभिड युनिट प्रमुख हुनुहुन्छ ।
Jan. 21, 2022, 4:12 p.m.
विशेषगरी तातोपानी र मास्क प्रयोग गर्ने /
Jan. 21, 2022, 4:08 p.m.
अलि अलि रुघा छ , ज्वरो कतिबेला धेरै आउँछ , जीउ पनि दुख्छ , खोकी नि छ /
Jan. 21, 2022, 3:37 p.m.
यो खोप गर्भवती महिला र शिशु भएका महिलाले पनि लगाउन हुन्छ कि हुँदैन , त्यो भनिदिनुपर्यो /
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कृषि उत्पादन र निर्यातको क्षेत्रमा केन्...
जेठ १४, २०७९ शनिबार
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि ओलीकाे अभिव्यक्ति गन्थन मात्रै :...
महँगी बढ्याे, भान्साबाटै विद्रोह हुने हो कि भन्ने परिस्थिति बन्...
निजगढ विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्चको फैसला अविवेकी निर्णय ...
ओलीलाई २ पटकसम्म माओवादीले प्रधानमन्त्री बनाइदियो, हिम्मत भए ए...
धनगढीको गेटामा यसै वर्षदेखि ३ सय बेडकाे अस्पताल सञ्चालनमा आउने
सुक्खा पहिरोका कारण खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक एक महिनादेखि बन्द
काठमाण्डौ र धरानका मतदाताले दलहरुलाई प्रश्न खडा गरे : प्रचण्ड
अर्थतन्त्रमाथि बोझ थप्ने र 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम नल्याउन पूर्वअर्थमन्...
दाङ : सिकार खेल्न गएका बेला गोली लागेर एक जनाको ज्यान गयो, ...
लद्दाखमा बस दुर्घटना हुँदा सात जना भारतीय सैनिकको ज्यान गयो,...
काठमाण्डौमा यात्रुका दु:ख : सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्नै सास्त...
युक्रेनका राष्ट्रपति र फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता, यु...
च्याम्पियन्स लिग : उपाधिका लागि रियल मड्रिड र लिभरपुल खेल्दै
श्रीमतीको हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालाको सजाय छुटको फैसला उल्टियो, २० वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक, अन्तै विकल्प खोज्न आदेश
काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह र उपमेयरमा सुनिता डंगोल निर्वाचित
सर्वाेच्चकाे आदेशले निजगढ विमानस्थलमा ३ दशकदेखिकाे मेहनत खेर गयाे : देवकाेटा
गठबन्धनको राजनीतिमा ठूला दलले मात्र फाइदा पाउने गर्छन्
बजेटमा लोक रिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउनु घातक, विपन्नलाई खाद्यान्...
पालिका चुनाव : प्रतिस्पर्धा एकातिर, नतिजा अर्कोतिर !
आर्थिक सहायताका लागि पालिकाबाटै यसरी दिनुहोस् बाेर्डमा निवेदन
परदेशिका श्रीमतीले भोग्ने लाञ्छना
परदेशमा बसेर हेर्दाको त्यो चुनाव, मतदान गर्न पाउँदाको यो चुनाव
जेठ २, २०७९ सोमबार
चुनावमा किन उठेनन् परदेशी श्रमिकका समस्या ?
बैशाख २६, २०७९ सोमबार
+977 1 5451716 (hotline)
+977 1 5455872, 5455870
+977 1 5455872, 5455870 ext. 148/ 167
+977 1 5455872, 5455870 ext. 108
© Ujyaalo Multimedia Pvt. Ltd.- 2022